နေတစ်စင်း နှင့် ကောင်းကင်ပြာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » နေတစ်စင်း နှင့် ကောင်းကင်ပြာ…
နေတစ်စင်း နှင့် ကောင်းကင်ပြာ…
Posted by နောင် ရိုး on Sep 12, 2014 in Arts & Humanities, Copy/Paste, Cultures, Members | 72 comments
ပထမဆုံးကျနော် ပြောချင်တာက…ဒီစာကို ကျနော့်မျက်ရည်တွေနဲ့ ရေးခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့…..
နောက်ထပ် ထပ်ပြောချင်တာက…ဒီပိုစ့်ဟာ ကျနော့်ရဲ့ နောက်ဆုံးပိုစ့်တစ်ပုဒ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ……….
ပြီးတော့…ခုစာမှာ…ကျနော်ရေးလိုက်တဲ့စာသားတွေကို လိုက်ခံစားတာထက်…..မိန်းနေရာကနေ….ငါ့ကိုသာဆိုရင် ဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ခံစားပေးဖို့ ကျနော် တောင်းဆိုချင်တယ်..….။
မိန်းများ… ဒီပိုစ့်ကို မြင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်…ကျနော့်ကို အပြစ်တင်မလား…၊ သူမပြောနေကျ နင်ကတော့လေ…ဆိုတဲ့ စကားကိုပဲ ပြောမလား..ကျနော် မသိပါ…။ တစ်ကယ်လို့ … မိန်းဆီက အခုချိန် အဲ့ဒီအရာတွေထက်မက အဆိုးဆုံးတစ်ခုခုကို ကျနော်ရမယ်ဆိုရင်တောင်မှ..အဲ့ဒါအဆိုးဆုံးအရာဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုချင်ပါသည်..။
ဒေါသသံ..မုန်းတီးသံ…အပြစ်တင်သံမပါအောင် ဒီပိုစ့်ကို ကျနော်…တစ်ညလုံး ထိုင်ရေး ထိုင်ဖျက်ခဲ့ရသည်…။ ပြောချင်သလောက် မပြောခဲ့တာ… မိန်းမျက်နှာကြောင့်သာ ဖြစ်သည်…။
ကျနော် ၀န်ခံခဲ့ဖူးသည်….။ မိန်းချစ်သူ ဘယ်သူလဲ ကျနော်အလွန်အမင်းသိချင်သည်….။ ချော့တစ်ခါချောက်တစ်လှည့်မိန်းကို မေးပေမယ့် မိန်းပြောဖို့ အခါခါ ခေါင်းခါလေ…ကျနော့်သိချင်စိတ်တွေ ပိုပိုပြင်းပြလေ…။
ကျနော် မိကောင်းဖခင် သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်…။ ဆိုးပေတေနေသူ၊ ကလေကချေတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ….။ မိန်းချစ်လို့ မိန်းရွေးချယ်ထားသူဟာ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်…ရန်လုပ်မည်၊ ပြသနာရှာမည်မဟုတ်မှန်း…မိန်းသိသည်…။
ဒါဆို ဘာကြောင့်များ ကျနော့်ကို မပြောပြရတာလဲ…။
ဘာကြောင့် မပြောရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့ အဖြေဟာ..ကျနော့်ခေါင်းထဲမှာ…ချာချာလည်သည်….။
မရလေ ပို..လိုချင်လေ…ကျနော့်စိတ်က ပုံမှန်လူထက် ပိုဆိုးခဲ့သည်…။ ဒါကြောင့်လဲ ကျနော် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သိနိုင်မလဲဆိုတာ အမြဲ ကြံစည်နေခဲ့ကြောင်း ခင်ဗျားတို့ကို ၀န်ခံပါသည်..။
လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့ကွင်းဆင်းလေ့လာဆိုသော ခေါင်းစဉ်အတွက် ရာထူးကြီးကြီး အဖေ့ငယ်သူငယ်ချင်းလဲ ရှိသော၊ မိန်းလဲရှိနေသော မိန်းတို့ကုမ္ပဏီကိုပဲ ကျနော် ရွေးချယ်ခဲ့သည်…။ မိန်းတို့ကုမ္ပဏီကလဲ ကုမ္ပဏီကြီးမို့…ကျနော်တို့အလုပ်ကလဲ Construction ပိုင်းမို့ အဖေကလဲ လိုလိုလားလားပဲ လက်ခံခဲ့ပါသည်..။
Estate Management, Home Owner Relationship, Customer Service, HR, Finance, Utility Operation, Marketing ခေါင်းစဉ်ပေါင်းမြောက်များစွာ သင်ယူချိန်မှာ…ကျနော် အပျော်ရွှင်ဆုံး ဘာသာရပ်က HR ဖြစ်သည်…။
ထိုခေါင်းစဉ်အောက်ဖြင့် မိန်းရုံးခန်းကိုရောက်တိုင်း ကျနော်ထိုင်ဖို့၊ ကျနော့်ကို သင်ပေးဖို့၊ (လူကြီးတွေမရှိချိန် ဂိမ်းဆော့ဖို့၊ ရွာလည်ဖုိ့) ကျနော် ရွေးသောနေရာသည် မိန်းထိုင်သည့် နေရာ ဖြစ်သည်…။
ချစ်သူရှိပြီလို့ မိန်းကြေငြာပြီး နောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာတော့ မိန်းကလဲ ပါးနပ်စွာပဲ…ကျနော်လာမည်သတင်းကြားတိုင်း သူမ History တွေကို Delect ထားနှင့်ပြီး ဖြစ်နေတတ်သည်…။
တစ်ရက်တော့…အဖေခိုင်းသည့်ကိစ္စဖြင့် မိန်းတို့ဆီလာရင်း မိန်းရုံးခန်းကို ရောက်ဖြစ်သည်….။ အဲ့ဒီအချိန်…Training တစ်ခုရှိသောကြောင့် Computer ရှေ့မှာ မိန်းမရှိနေခဲ့ပါ…..။
Ethic ကို ကျနော်သိသည်….။ သို့သော်…Ethic က ကျနော့်သိချင်စိတ်ကို မကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါ….။
Training ဘယ်အချိန်ပြီးမယ်မှန်း သိနေတဲ့ကျနော် မိန်းကွန်ပြူတာကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ပဲ မွှေခဲ့ပါသည်….။
ကျနော် ….. သိပ်မမွှေလိုက်ရပါ….
ဟုတ်သည်…။ ကျနော် အစောကြီးကတည်းက သိနေခဲ့ပါသည်…….။ မိန်းရဲ့ စိတ်ကို ဟိုးးးးး အောက်ခြေကအစ သိနေတဲ့ကျနော်…မိန်းချစ်သူရဲ့ Profile ကို မွှေလိုက်ချိန်မှာ..ကျနော်…မိန်းအတွက် အရမ်းကို စိုးရိမ်သွားခဲ့တာကတော့ မိန်းအတွက်ဖြစ်ပြီး ကျနော် မိန်းကိုလက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ ခံစားမှုထက်ကို ပိုဆိုးခဲ့ပါသည်.….။
မိန်း….ခံစားရတော့မှာလားးးးးးးး။ ကျနော် အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ ညဘက်တွေ အိပ်မပျော်နိုင်ခဲ့….။
ငါ ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့ အမြဲ တွေးခဲ့သည်….၊
(ဒါကြောင့်လဲ…ကျနော့်ရဲ့ ဟိုကလေးမတွေ…အခန်းဆက်ရှည်ခဲ့တာ ဖြစ်သည်….။ သို့သော်…ကျနော်..ဘယ်လိုပဲ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်…အသုံးမ၀င်ခဲ့ပါ…)
သူ ဘယ်သူဆိုတာ သိသွားပြီးနောက်မှ..မသိစဉ်အချိန်တုန်းကထက်စာလျှင်…ကျနော် မြောက်များစွာ ပိုစိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရသည်…။
ငါ မသိခဲ့ရကောင်းသားလို့…တွေးမိသည်အထိ….၊ တချို့ကိစ္စတွေမှာ မသိနေခြင်းသည်သာ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို လက်ခံလိုက်မိသည်အထိ….
“ငါတို့ အဆင်ပြေပါတယ်….၊ ငါ့အပေါ် အရမ်းကောင်းတယ်….”
ကျနော် စိတ်ပူမှာစိုးလို့…မိန်းပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစကားတွေကို ကျနော် ယုံချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့ရသည်…။
မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ထဲက မော်ဒယ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို စေ့စေ့ကြည့်ရင်း… “ငါလဲ သူ့လို လှချင်လိုက်တာဟယ်….” လို့ ရီသလိုမောသလို မိန်းပြောခဲ့တုန်းက အဲ့ဒီ ရီမောခြင်း မျက်နှာဖုံးနောက်ကွယ်မှာ…ဘာရှိမှန်း သိသိချည်းနှင့်…ကျနော်…မသိဟန်ဆောင်ခဲ့ရဖူးသည်…။
ပိတ်ရက်တွေတိုင်းမှာလိုလို အိမ်မြဲခဲ့သည့် မိန်းကို ဘယ်မှ မသွားဘူးလားလို့ မေးခဲ့တုန်းက “သူနေမကောင်းဘူးဟ” လို့ မိန်းပြန်ဖြေခဲ့ဖူးသည်…။ တစ်လကျော်ကာလက ဒီလောက်တော့ သွေးမအေးသင့်ဘူးမဟုတ်လား….။
“နင့်ကို လိမ်တာလဲ ဖြစ်နေပါဦးမယ်” လို့…ကျနော် ချောက်တွန်း တွန်းတော့ သူမ ချက်ချင်းငြိမ်ကျသွားပြီး “ငါ့ကို ဘယ်တော့မှ သူမလိမ်ဘူး” လို့ ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြန်ပြောခဲ့တာ…
ထုံးစံအတိုင်း သူမတော့ သူမလူကို ကာဗာလုပ်ပြီထင်ထားခဲ့ပေမယ့်…..အဲ့ဒီစကားကတော့ မိန်းအမှန်ပြောတာ ဖြစ်သည်….
“ကြောက်စရာ မလိုတဲ့သူကို လိမ်စရာလဲ မလိုဘူးမဟုတ်ပါလား…..?????”
ကျနော့်ကို ရှောင်နေတဲ့ မိန်းကို မနှောင့်ယှက်ချင်လို့..၊ သူမ အဆင်ပြေနေတယ်လို့ မှားယွင်းစွာ…ကျနော်ထင်နေခဲ့လို့၊ ကျနော် အဆက်အသွယ်လုပ်လိုက်ရင်များ သူတို့နှစ်ယောက် ကတောက်ကဆ ဖြစ်ကြလေမလား အတွေးတွေနဲ့ ကျနော်ရင်နာစွာ၊ ခံပြင်းစွာ..ရှောင်ပေးရင်း…ကျနော်နဲ့ မိန်း အဆက်အသွယ်ခဏ ပြတ်သွားခဲ့သည်…။
နောက်ပိုင်းမှ မိန်းရဲ့ညီမဆီက ပြန်ကြားခဲ့သော မိန်းအကြောင်းများက ကျနော့်ကို ရူးသွပ်သွားစေလောက်အောင်အထိ ပြင်းထန်သည်…။ မိန်းဒီလောက်ထိ အခြေအနေဆိုးနေခဲ့မယ်၊ ဆိုးသွားခဲ့မယ်လို့ ကျနော် မထင်ထားမိခဲ့…
အမြဲ…ခေါင်းမော့နေခဲ့သူ…၊ စိတ်မာသယောင် ဖုံးကွယ်ထားတတ်သူ၊ အမြဲ ဂရုစိုက်ခံချင်သူ…၊ အမြဲသူမကသာ ပြေးလွှားရှောင်ပုန်းနေခဲ့ချင်သူ…မိန်းတစ်ယောက် သူမရဲ့ ကျရှုံးမှုတွေအတွက်…အရှက်သည်းခဲ့သည်လား….၊ အားငယ်ခဲ့သည်လား….။
သူမ ဖြစ်သမျှ ရင်ဖွင့်ဖို့ လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲ စာအုပ်တစ်အုပ်သာ ရှိခဲ့သည်….။
ဒါကြောင့်လဲ…ကျနော်တို့အားလုံး နောက်ကျသွားခဲ့တာများလား မသိပါ…။ (မိန်း၏ ပထမမုန်တိုင်းကို ကျနော် သိပါသည်….။ အဲ့ဒီအချိန်…သူမပြိုလဲပျက်ယွင်းခဲ့သော်လဲ မတ်မတ် ပြန်ထူနိုင်ခဲ့ပေမယ့်…ယခုတကြိမ်မုန်တိုင်းတွင်တော့ မိန်းတစ်ယောက် ဟိုးးးးးးးးးးးး အဝေးဆုံးထိ လွင့်ထွက်သွားခဲ့ရပြီ….)
ကျနော် မရူးသွားရုံတမယ်ဖြင့်…မိန်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကို ဖတ်ခဲ့ရသည်….
မိန်းတစ်ယောက် ဘယ်လောက်တောင် နာကျင်ကြေကွဲခဲ့ပါသလဲ……..???? ကျနော် မမှန်းဆနိုင်ပါ…..
ဘယ်လောက်နောက်ကျတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်…လမ်းမှောင်မှောင်ကို တစ်ယောက်ထဲပြန်ရဲတဲ့..၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်… (ဘေးအိမ်က လူသေသွားတာ မကြာသေးချိန်…) မိန်းတို့ အိမ်ကျယ်ကြီးထဲမှာ…တစ်ယောက်ထဲ အိပ်ရဲတဲ့ မိန်းကို သူမအိမ်က သတ္တိရှိသလို ယူဆခဲ့ကြသည်…။
မိန်းညီမ အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်သော်လဲ မရတဲ့ Law စာတွေကို မိန်းတစ်ယောက်… တစ်ခေါက်ဖတ်ရုံမျှဖြင့်…လိပ်ပတ်လည်အောင် အလွတ်ပြန်ရှင်းပြနိုင်တဲ့ မိန်းရဲ့ညာဏ်ရည်ကိုလဲ…မိန်းမိသားစုက အထင်ကြီးခဲ့ကြသည်..။
ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း နောက်မဆုတ်ဘဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့မိန်းကို…ထက်မြက်သူလို့…မိန်းအိမ်က သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်…။
တချို့ကိစ္စတွေမှာ..မိန်းအတွက် အန္တရာယ်ရှိပြီး ပင်ပန်းခဲ့တာ ကျနော်သိလို့..တားခဲ့ပေမယ့်… မိန်းကတော့…သူမရဲ့ Challenge တိုင်းကို I can’t ကို ပြောဖို့…..အကြောက်ကြီး ကြောက်ခဲ့သည်…။
သူမ တောင်းဆိုမှ ရနိုင်မယ့် တစ်ဖက်က မကောင်းတတ်လို့ အားနာလိုက်လျောပေးရမှုတွေကို မိန်းအမြဲပဲ တောင်းဆိုလိုက်ဖို့ လျစ်လှူရှုတတ်ခဲ့သည်….။
နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ထိခိုက် ထိတ်လန့်နေပေမယ့် ရှေ့တင်တော့ ခပ်မာမာနေပြခဲ့တဲ့မိန်း၊ အမြဲ…ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီး… သတ္တိကောင်းပြ ၊ ဟန်ဆောင်ကောင်းပြခဲ့သောမိန်း….
ဒါတွေကြောင့်လဲ…မိန်းအိမ်က မိန်းကို စိတ်ချလက်ချ ရှိခဲ့သည် ထင်ပါသည်…။
သူမ၏ ငယ်စဉ်ကတည်းက (ဘယ်သူမှ သတိမထားမိစွာ..ရခဲ့သည့် စိတ်ဒဏ်ရာတွေကြောင့်) ဂရုစိုက်ခံလိုမှု၊ ..အစွဲအလမ်းကြီးမှုတို့ကတော့ သူမ၏ အားနည်းချက်ဖြစ်နေခဲ့သည်ကို…မိန်းမိသားစု မရိပ်မိခဲ့….။
ကျနော် ပြောခဲ့ဖူးသလို….သူများထက် ၂ဆ ပိုလိုချင်တဲ့မိန်း၊ သူမအလိုချင်ဆုံးသူဆီက တခြားသူတွေနဲ့ တန်းတူတောင် မရခဲ့တဲ့ အရာတွေအတွက် သူများထက် ၂ဆ မက ပိုခံစားခဲ့ရသည်…။ သူမ ဘယ်လို မလိုချင်သောအရာတွေ သူမချစ်သူဆီက ကြုံခဲ့ပေမယ့်…၊ သူမ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်နာကျင်နေပေမယ့်….သူမ အပြုံးတောင် မပျက်ပြခဲ့…
မိန်း….ထိုသူ့ကို …. အရမ်းးးးးးးးးးးးချစ်ပေးခဲ့သည်…။
ပထမတစ်ခါ ဆေးရုံတက်ရကတည်းက ဖုန်းကို ၅ပေအကွာမှာ ထားအိပ်ရမယ်…ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့စကားကို မိန်းလျစ်လှူရှုခဲ့သည်…။
မိန်းညီမရဲ့စကားအရ…တချို့ညတွေ မိန်းဖုန်းပြောတတ်တာ ကျနော် သိသည်..။ တစ်ခါတစ်လေ အဲ့ဒီဖုန်းတွေဟာ…မနက် ၁နာရီ ၂နာရီအပြင်…တစ်ညထဲ ၃၊ ၄ကြိမ်လောက် ပြန်ပြန်လာတတ်တာမျိုးလဲ ရှိတတ်သည့်ညတွေ ကျနော်ပြန်ကြားပါသည်…။
ဘယ်လောက်ခေါင်းမူးနေပေမယ့်….ဖုန်းလာချိန်တိုင်း ပျော်နေတတ်ပြီး အိပ်ချင်တယ်လို့..…တစ်ခွန်းမှမပြောခဲ့ဘဲ….မနက်ရောက်မှ ရုံးချိန်အမှီ ဒယီးဒယိုင်ထခဲ့ရတဲ့…မိန်းရဲ့ မနက်တွေအတွက် ကျနော်..စိတ်မကောင်းပါ…။
သူငယ်ချင်းဆရာဝန်တစ်ယောက်နှင့် ကျနော် ဖုန်းပြောတော့…မိန်း ကျနော့်လက်က ဖုန်းကိုယူရင်းမေးခဲ့တာက..ကျနော် မျှော်လင့်ထားသလို… အာရုံကြောနှင့် ပတ်သတ်တာမဟုတ်ဘဲ….
ကျောက်ကပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့်…ကုသရမယ့် နည်းလမ်းတွေသာ ဖြစ်သည်…..။
မိန်းချစ်ခဲ့သော ထိုသူအား…မိန်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကို ကျနော်ကိုင်ရင်း…မေးချင်တာတွေ ရှိသည်….။ ကျနော့် ရင်ထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေတဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ ပြောစရာစကားတွေ အများကြီးကို ရှိနေသည်….။
မိန်းရဲ့ စိတ်ထိခိုက်နာကျင်မှုကိုတွေ ခင်ဗျားသတိထားမိခဲ့ရဲ့လား…???
မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့…အရှက်တရား၊ ၀မ်းနည်းမှု၊ စိတ်မကောင်းမှုတွေ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံကို ခင်ဗျား မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားဖူးခဲ့လား….???
မိန်းကို ခင်ဗျား လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမူအယာ၊ ဒါမှမဟုတ်…စကားမျိုး အပြုအမူမျိုး ခင်ဗျား ပြခဲ့ဖူးလား….???
သူမရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုရှိခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာ…ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့…ခင်ဗျား ဘာတွေများ မိန်းကို နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ဖူးလဲ…???
သူမ ခင်ဗျားကို အရမ်းးးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာရော….ခင်ဗျား သူမအနား ရှိနေပေးခဲ့ဖူးလား..???
မိန်းလက်ကိုသာ ကိုင်ထားရရင်၊ မိန်းသာရှိနေမယ်ဆိုရင်…ဘယ်လို သတ်မှတ်ချက်တွေ၊ ဘယ်လိုကြုံလာသမျှတွေ၊ ဘယ်လိုလူတွေကြားထဲကို မဆိုသွားနိုင်တဲ့… ကြံကြံခံပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတ္တိရော ခင်ဗျားမှာ…ရှိခဲ့ရဲ့လား..???
ခင်ဗျားရဲ့ အဖြေဟာ….”No” တစ်လုံးသာ ဖြစ်မည်ဆိုသည်ကို ကျနော်…မိန်းအတွက် စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် သိပါသည်….။
လှမ်းကိုင်လိုက်တဲ့ မိန်းလက်ကို လူတွေကြားထဲ ခင်ဗျား ပုတ်ချခဲ့တာ … ကျနော်သိသည်…။
ပြန်ဆက်မယ်စကားတစ်ခွန်းကြောင့်….မိန်းမအိပ်ဘဲ စောင့်ခဲ့သည့် ခင်ဗျားပြန်မဆက်ခဲ့သော ဖုန်းတွေကို ကျနော်…သိသည်…။
မိန်းမျှော်လင့်တကြီးထားပြီး…ပျက်စီးသွားသည့်..ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ချိန်းဆိုမှုတွေကိုလဲ…ကျနော် သိသည်…။
ခင်ဗျား….မိန်းအပေါ် ၀တ္တရားကျေ ဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့လား…..ကျနော်သိသည်….။
ခင်ဗျား ခေါ်သော..ဖုန်းထဲ..၊ ပြောခဲ့သောစကားများထဲမှာ…မိန်းကိုချစ်သော၊ ဂရုစိုက်သောစကားများ မပါခဲ့တာလဲ ကျနော် ရိပ်မိပါသည်….။
ခင်ဗျားရဲ့ Facebook ထဲမှာ၊ ပြောသမျှ Comment တွေထဲမှာ၊ ရေးသမျှစာတွေထဲမှာ တခြားသူတွေရဲ့ အကျွင်းအကျန်တွေသာ ရှိတတ်သော်လဲ မိန်းနဲ့ ပတ်သတ်သည့်သဲလွန်စ ဘာတစ်ခုမှ..မရှိခဲ့တာ..ကျနော်သိသည်…။ (မိန်းဟာ ထိုသူ့အတွက် တိတ်တိတ်ပုန်း ရည်းစားတစ်ယောက်အဆင့်လား…..)
မိန်းခံစားနေတဲ့အချိန်တွေမှာတောင်၊ မိန်းနေမကောင်းမှန်း ခင်ဗျားသိသိချည်းနဲ့တောင် …. ခင်ဗျားရဲ့…အရင်ရည်းစားဟောင်းပုံတွေနဲ့ Facebookပေါ် အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တာသိသည်….။ (မိန်းတော့မသိ….၊ မျက်နှာပြောင်တိုက်လွန်းတဲ့၊ ရက်စက်လွန်းတဲ့၊ မိန်းကိုမညှာတာလွန်းတဲ့ ခင်ဗျားကို ကျနော်တော့ အတော့်ကို စိတ်တို အံ့သြပါသည်…။ )
မိန်း ခံစားနေရချိန်မှာ…မိန်းဘာများဖြစ်နေလဲ တွေးဖော်မရဘဲ…မော်ဒယ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် ခင်ဗျားအီစီကလီ ဇာတ်လမ်း စ,ရိုက်နေတာလဲ ကျနော်သိသည်…၊ တခြားမိန်းမတစ်ယောက်နှင့် ဇာတ်လမ်း အခုစ,နေပြီဆိုတာလဲ ကျနော်သိသည်…။ မိန်းလဲ သိခဲ့ပါသည်….။ ( ဒါတွေကြောင့်လဲ… ပိုဆိုးသွားခဲ့တာ ဖြစ်မည်….။ )
မိန်းအပေါ် အလေးအနက်မထားနိုင်ဘဲနဲ့များ၊ ခင်ဗျားစိတ်ထဲ မိန်းမရှိဘဲနဲ့များ၊ မိန်းကို ချစ်သူတစ်ယောက်လို ဂရုမစိုက်ပေးနိုင်ဘဲနဲ့များ…မိန်းကို တကယ်ချစ်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့များ…
ဒါနဲ့များ…မိန်းက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ငြင်းခဲ့တာတောင် ခင်ဗျား..ဘာလို့များ.. မိန်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသလဲ…???
ခင်ဗျားရဲ့ သူမကို မလိုအပ်မှုတွေ၊ ခင်ဗျားရဲ့ ရှုပ်ပွေလီမှုတွေ၊ ခင်ဗျားရဲ့…ဖွန်ကြောင်စရာ မိန်းမ မရှားမှုတွေ…..၊ ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်သာယာမှု အပြောင်းအလဲ မြန်တာတွေ….
ဒါတွေကြောင့်လဲ….မိန်းတစ်ယောက် သိမ်ငယ်စိတ်နဲ့ ဘေးဖယ်နေလိုက်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာ ဖြစ်မည်…။
အခုအချိန်မှာ….မိန်းပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ကျနော် ခဏခဏသတိရနေတယ်…
“တချို့အလုပ်တွေမှာ…လူတစ်ယောက်ကို အလုပ်ထုတ်ချင်ရင်…၊ နင် ထွက်တော့လို့ မပြောချင်ရင်…၊ ၃ လစာထုတ်မပေးချင်ရင်….အဲ့ဒီလူ… မထွက်ထွက်ချင်အောင်….လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ ထွက်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ်…။ လိုချင်တာက “အလုပ်ထွက်ခြင်း” ပဲ….။ နင်…ထွက်တော့ဆိုတဲ့စကားက နာကျင်ကောင်းနာကျင်စရာပေမယ့်….တစ်ချက်ထဲနဲ့ သေအောင်သတ်တာ၊ ဒီလိုလုပ်တာကတော့… အချက်ပေါင်းများစွာ..ထိုးနှက်ပြီးမှ…လူရဲ့စိတ်ကို သေအောင်သတ်တာ…၊ တမြေ့မြေ့နာကျင်ပြီးမှ… မခံနိုင်တော့လို့…အရှုံးပေးလိုက်ရတာ…..”
ခင်ဗျားဟာ…ဘယ်လောက်ကြီးပဲ….လူတော်တစ်ယောက်ဖြစ်နေစေဦးတော့…၊ ခင်ဗျားကို…အထင်တကြီးကိုးကွယ်တဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ရှိဦးတော့….၊ ခင်ဗျားကို…ဘယ်လောက်ပဲ ကာကွယ်ပြောဆိုသူတွေ…ရှိဦးတော့…ကျနော်…ေ+ာက် ဂရုမစိုက်ဘူး….။
တကယ့်အမှန်တရားတစ်ခု ကျနော် ပြောမယ်….
မိန်းကို … သတ်တာ ခင်ဗျားပဲ…..။ ခင်ဗျားဟာ…လူမသိသူမသိ သတ်တဲ့၊ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို ထိခိုက်နာကျင်အောင် လုပ်တဲ့… ကိုယ်တာဝန်မယူနိုင်ဘဲနဲ့ ရည်းစားစကားကို လွယ်လွယ်ကူကူ အာချောင်တတ်တဲ့သူ…၊
ခင်ဗျား မိန်းကို သတ်တယ်….၊ တခြားသူတွေ မသိပေမယ့်…ကျနော် … သိတယ်…။ ခင်ဗျား…မိန်းကို …သတ်ခဲ့တယ်…။ မိန်းကို သတ်ခဲ့တာ ခင်ဗျားပဲ…။ ခင်ဗျားကြောင့်ပဲ မိန်းသေသွားခဲ့တာ…….။ ခင်ဗျားဟာ…တကယ့် လူသတ်သမား…။ ခင်ဗျားက မိန်းကို သေအောင်…သတ်ခဲ့တဲ့သူ…
မိန်း…..သူမရောက်တဲ့နေရာမှာ…Special One တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်…ကြိုးစားနေလိမ့်မယ်…
မိန်း….သူမချစ်တဲ့….(သူမရဲ့ ဒုတိယ အိမ်လို့ပြောတဲ့..) တွံတေးက မိဘမဲ့ကလေးတွေကျောင်းကို မကြာမကြာ ရောက်ကောင်းရောက်နေလိမ့်မယ်…
မိန်း….တခြားသူတွေကို ကူညီဖို့ ကြိုးစားနေလိမ့်မယ်….
ကျနော် အခုပြောပြခဲ့သော၊…ထိုလူ မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့သော…ထိုအရာတွေအတွက်…မိန်းတစ်ယောက် တော်တော်အထိနာပါသည်…..။ ဘယ်လိုမှ တောင့်မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံး မိန်းတစ်ယောက် ပြိုလဲခဲ့သည်…..
ရခဲ့သော အလုပ်သစ်ကိုမသွား၊ စိတ်နဲ့လူမကပ်၊ အစားမမှန်၊ ညဘက်မအိပ်ဘဲ အမြဲငိုနေတတ်တဲ့မိန်း နဂိုထဲက အနည်မကျသေးသည့် ကျန်းမာရေးမကောင်းပါ….။
မိန်းငိုတိုင်း ဘာကြောင့်လဲ ခဏခဏမေးတတ်သည့် သူမညီမကို ရင်မဆိုင်ချင်လို့ မိန်းအခန်းပြောင်း အိပ်ခဲ့ရသည်….
နောက်ပိုင်း အဲ့ဒီအခန်းထဲက မိန်း ထွက်မလာတော့…
မိန်းအမေ နယ်ကရောက်လာပြီး…အခန်းတံခါးကိုဖျက်ပြီး ၀င်ရချိန်မှာတော့…မြင်လိုက်ရတာက…
မိန်းတစ်ယောက်… ကြမ်းပြင်ပေါ်ခွေခွေလေး…သတိလစ်နေခဲ့တဲ့…အနေအထားတစ်ခုမှာ….။ မိန်း…သတိလစ်နေချိန်ဟာ…ဘယ်နှရက်လောက်တောင် ကြာပြီလဲ မသိနိုင်ခဲ့…….။
မိန်းရဲ့ညီမ လှမ်းပို့သော ဒီသတင်းဆိုးကြောင့် နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ ကျနော်…ချိန်းထားသမျှ အလုပ်တွေ အကုန်ဖျက်ပြီး အမြန်ပြန်လာချိန်၊ မိန်းကိုမြင်ရချိန်မှာ..မိန်းဆေးရုံကုတင်ပေါ် ဆေးပိုက်အပ်တန်းလန်း၊ အပ်ပေါက်ရာတွေဗလပွနဲ့ ဖြစ်နေပြီ..
ဖြူဖျော့ပြီး ဝေဒနာခံစားနေသည့်မိန်း၊ သူမနာကျင်တာ ရုပ်ဒဏ်ရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်မှန်း ကျနော် သိပါသည်…။
ခဏကလေး…(တကယ့်ကို ခဏကလေး) သတိရလာတဲ့ မိန်းမျက်လုံးတွေထဲကနေတဆင့် သူမရဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ကျနော် မြင်နေရသည်….
မိန်းကို မြင်ရတာ…ကျနော့်ရင်ကို သံချွန်ချွန်နဲ့ အထိုးခံရသလို နာကျင်လှသည်…..။ ကျနော့် ရင်တစ်ခုလုံး စုတ်ပြတ်ထွက်သွားသလို….၊ ကျနော့် အသဲနှလုံးတွေ ရင်ဘတ်ထဲက ခုန်ပေါက်ထွက်သွားသလိုကို…..
သူမ မရှိတော့ဘူးဆိုတာ ကျနော်…..ခုချိန်ထိ….လက်မခံနိုင်သေး….
မိန်းကိုသာ …. ပြန်ရနိ်ုင်မည်ဆိုရင်…ကျနော် ပိုင်ဆိုင်သမျှ….ဘယ်အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် …. ပေးလိုက်ချင်သည်…..။
ကျနော် ချစ်သော…၊ သူတပါးကို ကူညီတတ်သော၊ ဆိုးနွဲ့ချင်သော၊ တစ်ခါတစ်ခါ ချောက်ချတတ်သော၊ သူမချစ်သူအပေါ် အရမ်းးးချစ်ခဲ့သော… မျက်နှာကြည်ကြည်နှင့် … စိတ်ကောင်းရှိသော ထိုကောင်မလေး…
မိန်း ပြောင်းအိပ်ခဲ့တဲ့ အခန်းထဲမှာ..မိန်းနောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ကျနော် ခင်ဗျားတို့ကို ပြမယ်..…။
ဘယ်လောက်ထိ ဆိုလိုကြောင်း ကျနော် မသိပါ….။ ကာယကံရှင် မိန်းသာ သိပါလိမ့်မည်…….။
“ မလိုချင်တာတွေ ရနေပေမယ့်
လက်ခံယူသူ…….မှား..ခဲ့..တယ်….။ … ။”
မိန်းတစ်ယောက်…နောက်ဆုံးအချိန်ထိ…သူမချစ်ခဲ့သူအပေါ် စိတ်မကွက်ခဲ့၊ မေတ္တာမပျက်ခဲ့ပါ…..။
သို့သော်…မိန်း မေတ္တာမပျက်ပေမယ့်…..ကျနော်ကတော့ ထိုသူ့ကို ကျိန်စာတိုက်ချင်သည်….။
“အဲ့ဒီလူ အသက်ရှင်နေတဲ့ အချိန်တွေတိုင်း…..
မိန်းကို ကြိမ်းချဉ်ဒယ်.. ဆူတာကို ပေါဒါနော်.. နှာတွေး မတွေးနဲ့။ မိန်းဘဲဆိုဒဲ့ကောင် ကို နာသိလယ်.. အဲဒဂောာင် တေဒင်းဂျိုး ကာလဏှာ တာလီဘန် အယ်လ်ကိုင်းဒါ အမြီးရအမြီးစား ခေါင်းရခေါင်းစားကောင်.. ကြောင်မပြောနဲ့ ကြွက်လောက်တောင် အသုံးမကျတဲ့ကောင်.. တေလလေဂျပိုး ရေမျှောကမ်းတင် ဘီယာသောက် မြက်ခြောက်စား…။
နောင်ရိုး နင် ဘာမှ မပူနဲ့.. နင့်အတွက် စစ်ကူလာပီ..။ အချိန်မှီသေးတယ်.. သူ မတေသေးဒဲ့.. နင်နဲ့ငါ နှယောက်ပေါင်းပီး ကင်းကောင်ပြာကို ကားတင်ပြေးမယ်..။ နင် ဖမ်းချုပ်ပြီး ကားပေါ်တင်.. ငါ ကားမောင်းပြေးမယ်.. လူတွေလိုက်လာတဲ့အခါ လမ်းလွှဲအောင် နင်က အခြားတဖက်ကို ခြေလျင်ထွက်ပြေး..။ နောက်မှ ချိန်းထားတဲ့ နေရာမှာ ပျံစုံမယ်..။ ဆားချဉ်ပီ ကင်းကောင်ပြာလေးရယ်..